Moments Neshamwari 30
Zvinokwanisika here kukudziridza mhando mitsva yemiriwo, michero kana mbeu, zvakasiyana zvachose uye yakasiyana kubva kune dzimwe mhando dzinozivikanwa? Kana zvakadaro, zvinoitwa sei?
Zvinogoneka. Mumwe akawana mutsara uyo kubudirira kwakanyanya uye kwakanyanya kuzivikanwa ndiLuther Burbank weSanta Rosa, muCalifornia. VaBurbank havasati, sekuziva kwedu, vakagadzira mhando dzese dzakasiyana uye nyowani, asi hapana chinhu chinomutadzisa kuzviita kana achienderera mberi nebasa rake. Kusvika panguva ino, kusvika patinoziva, kuedza kwake kwakatungamirwa pakuyambuka kwemamwe marudzi emichero nemichero, achigadzira kwete imwe mhando dzakasiyana, asi imwe iine hunhu hwevaviri kana hwemumwe wevaviri kana iye mamwe marudzi anoshandiswa mukukudza kukura kutsva uku. Maakaundi mazhinji akadhindwa ebasa raVaBurbank, kunyangwe zvakadaro anogona kunge asina kuudza zvese zvaanoziva uye zvese zvaanoita, kuti abudirire izvo zviri zvake. Akaitira munhu basa risinganzwisisike. Akatora zvimwe zviripo zvisingabatsiri uye zvisakafanira uye akakudziridzira mumakwenzi anobatsira, chikafu chakanaka kana maruva akanaka.
Izvo zvinokwanisika kukudziridza chero miriwo, zvidyarwa, michero, kana ruva, izvo pfungwa zvinogona kufunga nezvazvo. Chinhu chekutanga chakakodzera kuvandudza rudzi rutsva: kuitakura. Kana pfungwa dzikasakwanisa kutora mhando nyowani, pfungwa idzodzo hadzigoni kukura imwe, kunyangwe iye nekucherekedza uye kushandisa kwayo kungaburitsa marudzi matsva emhando dzekare. Ani nani anoshuva kuumbika mhando nyowani anofanira kufungisisa pamusoro peiyo mhando yemhando yaangave ainayo uye ipapo anofanira kunyatsofungisisa uye nekuvimba pamusoro payo. Kana aine chivimbo uye anoshandisa pfungwa yake kushingairira uye asingatenderi kufunga kwake kudzungaira pane mamwe marudzi kana kuita zvisingabvumirwe mumafaro, asi achizofunga uye akafungisisa pane izvo zvisikwa zvaangave nazvo, ipapo, nekufamba kwenguva, anozova nemimba iyo pfungwa ichamuratidza mhando yaakange ada. Ichi chiratidzo chekutanga chebudiriro yake, asi haina kukwana. Anofanira kuramba achifungisisa nezvepfungwa yaakabata uye afunge nemoyo murefu nezveiye kufunga asina kudzungaira kune vamwe. Paanoramba achifunga, pfungwa yacho ichajeka uye nzira idzo mhando itsva dzingaunzwa munyika dzichajekeswa. Panguva ino, anofanira kuzvishandira kuti agone kushanda nemhando idzo dziri padyo neiyoyo aanofunga; kunzwa mukati mavo; kuziva mafambiro akasiyana uye kuve nekunzwira tsitsi nekufadza sapamiti inomhanya nemumatsipa nematsipa, kunzwa kuda kwayo uye kuapa, kuyambuka zvidyarwa iye zvaakasarudza wozofunga marudzi ake kupinda kuyambuka, kuti unzwe ichikura kubva pamhando mbiri dzaakasarudza, uye kuhupa hwomuviri. Iye haafanire, uye haazoiti, kana aenda kusvika zvino, ngaaore mwoyo kana asingaone kamwechete rudzi rwake rutsva sechigadzirwa. Anofanira kuedza uye kuyedzazve uye sezvaanoenderera mberi kuyedza iye achafarisisa nekufamba kwenguva kuona iyo mhando nyowani dzichiuya kuvepo, sezvazvichaita chaizvo kana ikaita chikamu chake.
Mumwe munhu anounza mhando nyowani mukushayiwa kuziva zvishoma nezve botany kana iye akatanga kutanga, asi anofanira kuzvijaira nezvese zvaanogona kudzidza nezveiri basa. Zvese zvinhu zvinokura zvine kunzwa uye murume anofanira kunzwa navo uye avade, kana aizoziva nzira dzavo. Kana angave akanakisa aripo mavari, anofanira kupa zvakanakisa zvaainazvo kwavari. Mutemo uyu unobata zvakanaka kuburikidza nehumambo hwese.